Injineer Mahad Abiib oo Shirjaraa id kuqabtay Oslo ayaa kaga hadlay warar sheegaya in Dowlada Fedraalka Somaliya ay doonayso inay xil u magacawdo. – Xeernews24
Injineer Mahad Abiib oo Shirjaraa id kuqabtay Oslo ayaa kaga hadlay warar sheegaya in Dowlada Fedraalka Somaliya ay doonayso inay xil u magacawdo.
8. April 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Sida uu qoray wargeyska kasoobaxa dalka Norway oo layiraahdo Klassekampen , ayaa lagu qoray in Mahad Abiib Xil muhiim ah ay siindoonto Dowlada Cusub kaasoo lagu sheegay inuu yahay xil diblimaasinimo ama lataliye (rådgiver) u magacaabo Mahad Abiib oo dowlada Norway ay kala noqotay sharcigiisa jinsiyada dhalashada Norway.
Klassekampen oo soo xiganayo lataliye katirsan xafiiska madaxweynaha Soomaaliya M.A Farmaajo, arinta magacaabista xilka Mahad ayaa ah mid si toos ah uga timid madaxweyna Soomaaliya.
Isla shalay ayuu Mahad utagay Poliska Norway kana dalbaday in loo fududeeyo sidii uu ku aadi lahaa Muqdisho isagoo ay lasocdaan inta badan Idaacadaha Norway wuxuuna kasooqaatay warqadihii uu kudoonana lahaa Basaborka Somaliga kasoo u kadoonanayo Safaarada Somalida ee Biljam, wuxuuna soobandhigay cadaynta warqadii uu kasooqaatay iyo Rasiidkii u lacagta kubixiyay .
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/04/Skjermbilde2.png 832 1768 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-04-08 19:33:552017-04-08 19:33:55Injineer Mahad Abiib oo Shirjaraa id kuqabtay Oslo ayaa kaga hadlay warar sheegaya in Dowlada Fedraalka Somaliya ay doonayso inay xil u magacawdo.
Magaaladi Garba-ciise Gurmad la,aan iyo Darxumo
Maamulka Hargeysa oo ka Galgashay shir ay Dani baday oo ay qayb ka ahaayeen Ruushka oo Xidhaya Qadka Mareykanka uu ka isticmaalo Suuriya Xiisada oo Cirka...